रेनोकोे नयाँ क्वीड गाडी सार्वजनिक, मूल्य कति ? - Aarthiknews
काठमाडौं । रेनो नेपालको नम्बर एक यूरोपीयन ब्रान्डले आज नयाँ क्वीड गाडी आकर्षक मूल्य २४.९९ लाखको शुरुवाती मुल्यमा सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ क्वीड गाडी डिजाइन, नवीनता र आधुनिकताको हिसाबले सफल उत्पादन भएको कम्पनीले बताएको छ ।
आकर्षक र नवीनताका स्तम्भहरूमा निर्मित, क्वीड नेपालमा रेनोको लागि खेल परिवर्तन गर्ने उत्पादन भएको छ । नयाँ क्वीड गाडी बोल्ड, अधिक स्टाइलिश र धेरै लोडेड फस्ट—इन—क्लास सुविधाहरूको साथ आउँछ । नयाँ क्वीड गाडी १ लिटर एससीई (स्मार्ट कन्ट्रोल इफिसेन्सी) पाउरट्रेन मैन्युअल र स्वचालित प्रसारण विकल्पहरूमा उपलब्ध रहेकको कम्पनीको जानकारी दिएको छ ।
नयाँ क्वीड गाडी सोमबारदेखि रेनाकोे सबै डीलरशिपमा उपलब्ध रहेको जनाएको छ । एडभान्स अटोमोबाइल प्रा.लि. का प्रबन्ध निर्देशक निकुञ्ज अग्रवालले भने, 'रेनो क्वीडले पहिले नै नेपालमा एक कडा र बफादार ग्राहक आधार स्थापना गरिसकेको छ र नयाँ क्वीडले हाम्रो विस्तार योजनाहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ र डिजाईन, नवीनता र आधुनिकताका क्षेत्रमा नयाँ बेन्चमार्क सेट गर्नेछ । हामी नेपालमा नयाँ क्वीड भित्र्याउन पाउँदा धेरै उत्साहित छौं । हालको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै हामी डिजिटल प्लेटफार्मको प्रयोग गरेर गाडी लन्च गर्दैछौं र हामी पनि यो अवसर सबैलाई सुरक्षित र स्वस्थ रहन अनुरोध गर्दछौं ।'
आकर्षक र नवीनताका स्तम्भहरूमा निर्मित, क्वीड नेपालमा रेनोको लागि एक महत्वपूर्ण मोडल हो । नयाँ एसयूभीबाट प्रेरित अगाडिको भाग एक नयाँ सिग्नेचर लाइटिंग- एसयभी स्टाइल लो माउन्टेड हेडल्याम्पद्वारा सुस्पष्ट पारिएको छ ।
अगाडि भागमा मुख्य तत्व फस्ट-इन-क्लास सिल्भर स्ट्रीक एलईडी डीआरएल हो । एलईडी लाइट गाईडहरूको साथ टेल ल्याम्प पनि छ । एसयूभीमा ठूला आर १४ भोलक्यानो ग्रे मस्कुलर मल्टि स्पोक चक्का, एसयूभी स्किड प्लेटहरू र १८४ एमएम हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
नयाँ स्पोर्टी स्टीयरिंग ह्वील र स्पोर्टी ओरेन्ज ह्वाइट अपहोल्स्ट्रीको साथ एक नयाँ आन्तरिक अनुरुपताले स्ट्राइकिंग एक्सटेरियरसंग पूरक बनाउँछ । फस्ट—इन—क्लास एलईडी डिजिटल उपकरण क्लस्टर, एउटा फ्लोर कन्सोल माउन्ट गरिएको एएमटी डायल र २०.३२ सीएम टचस्क्रीन मिडियान्याभ इभोल्युसन पनि रहेको छ ।
नौ महिनामा साढे चार हजार ऋणी कालोसूचीमा
सुन तोलको ९० हजार ७ सय पुग्यो
तनहुँ उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा श्रेष्ठ विजयी